धाइबा जी तपाइ त्यसै भएर दुब्लो हुनुभाको हो कि? हामीमध्ये धेरैजसो त्यस्तो फकाउने मान्छे नभएर निस्ताउँछौँ । घरमा बसिरहँदा 'खाजा खायौ ? खानुपर्दैन त बदमास मान्छे ?'
कि लेखमा मात्र यस्तो हो?
धाइबा जि का लेखहरु पढ्दा किन किन म आनन्दको अनुभुती गरिरहेको हुन्छु । उहाको लेखन शैली र शब्द चयनले मलाई सधैं लोभ्याइरहन्छ, हो म पनि सहमति छु यदि सुख दुखका सहनुभुतिहरु कोहि कसैसग साट्न नपाएसम्म जिबन कता कता खल्लो महशुश हुदो रहेछ।
उत्कृठ लेख धाइबा जि!
सायद यो नै जिबन हो क्यार हामी मन दुखाएर अनाम नदीको किनारैकिनार एक्लै बहकिइरहँदा खोजी गर्ने कोही नहुँदा पटक-पटक मर्छौँ ।
तर लोभ र मोह नहुंदो त संसार फिकै हुनेथ्यो। हामी एक्लोपनमा निसासिदै यत्रत्र बहकिदा कतै कसैको सामिप्य पाउंदा त्यतै हराउंछौ। सायद भोकाएर यसरी नकुदैको भए भेटिएको सामिप्य काफी हुदैनथ्यो होला। र हामी झन दुखी हुन्थ्यौं अनी बहकिरहन्थ्यौं नटुगिंने त्यो अनाम नदीको किनार यात्रामा।
तपाइका लेख राम्रा हुन्छन। यो पनि उत्क्रिष्ठ नै छ। पुन दौतरीमा यसरी छाउंदै जानुहोला। हामीलाइ तपाइको सरल लेखमा यसरीनै रेशमी कुकुनमा बेर्दैजानुहोला।
सबै शुभेच्छालाई स्वागत गर्छु, पठनका निम्ति धन्यवाद ।
विप्लवजी, रमाइलो कुरा गर्नुबयो । पूरापूर त होइन, आंशिक रूपमा त्यो पनि हो है म दुब्लाउनाको कारण :) लेखमा मात्र बनावटी कुरा कसरी पो गर्नु र ?
प्रवीणजी, नेपालियनजी र लुनाजी हरूको अपेक्षा आगामी लेखोटमा पनि पूरा गर्न सकूँ ।